AulaGEO, tolotra Mazava ho azy tsara indrindra ho an'ireo matihanina amin'ny teknolojia Geo - Geofumadas
Novambra, 2019 AutoCAD-Autodesk, Cartografia, cadastre, Fampianarana CAD / GIS, Engineering, qgis
AulaGEO dia tolo-kevitry ny fiofanana, miorina amin'ny fari-pahaizana Geo-injeniera, miaraka amin'ireo sakana maodely ao amin'ny filaharana Geospatial, Engineering ary Operations. Ny famolavolana metodolojika dia mifototra amin'ny "Courses Courses", mifantoka amin'ny fahaiza-manao; Midika izany fa mifantoka amin'ny fomba fanao izy ireo, manao ny lahasa amin'ny tranga azo ampiharina, indrindra ny tontolon'ny tetik'asa tokana ary miaraka amin'ny fanohanan'ny teôlôjia izay manamafy ny zavatra atao.
Ny mampiavaka ireo fampianarana metaly AulaGEO dia misy:
Fahafahana miditra amin'ny atiny Mazava ho azy. Midika izany fa azo alaina amin'ny hafainganan'ny mpianatra izy ireo, ary azo idirana im-betsaka araka izay takiana mandrakizay.
Azo ampiasaina amin'ny fitaovana finday.
Nanazava ny dingana tsirairay ny Audio, toy ny kilasy mahazatra.
Fitaovana hampidinana azy, hampiharana ireo fampianarana.
Natsangan'ny matihanina za-draharaha tamin'ny foto-kevitr'izy ireo.
Azo antoka ny 30 raha tsy afa-po amin'ny làlana novidina ianao.
Ny vidiny azo idirana tanteraka.
Azo ampiasaina amin'ny teny anglisy, ny sasany amin'izy ireo misy dikanteny amin'ny fiteny 15.
Azo ampiasaina amin'ny teny Espaniôla ihany koa.
Ny fivoaran'ny hevitra momba ny AulaGEO izay manazava tsara ny ambaratonga dia azo aseho an-tsary ao amin'ny tabilao, izay novolavolaina ao anaty fonosana toy izao:
Manam-pahaizana amin'ny modelling Geospatial.
Tafiditra ao ny fiofanana ao amin'ny Geographic Information Systems, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko tompondaka indrindra (ArcGIS) sy ny rindrambaiko QGIS maimaimpoana; Amin'ny ambaratonga efa mandroso dia misy ny fampivoarana fampiharana finday amin'ny alàlan'ny html5 sy ny Google Maps API.
Rafitra fampahalalana Geographic miaraka amin'ny ArcGIS 10
Mianara ArcGIS Pro Mora
Mianara arcGIS Pro mandroso
QGIS + ArcGIS Pro fomba mitovy ao anatin'io alalana io ihany
Geolocation fampiasana HML5 sy Google Maps
Web GIS sy ArcPy
Ny taranja dia azo raisina tsirairay, arak'izay filana sy traikefa efa anananao, na ho fanamafisana ny fahalalana mialoha.
Manam-pahaizana momba ny fihetseham-po lavitra
Fampidirana ho an'ny Sindrona lavitra
Modelling amin'ny tondra-drano miaraka amin'ny HecRAS hatramin'ny taloha
Famakafakana sy modely ireo tondra-drano miaraka amin'ny ArcGIS HecRAS sy GeoRAS
Fianarana Google Earth
Ny taranja amin'ity modely ity dia ambaratonga avo lenta izay azon'ny mpampiasa za-draharaha amin'ny fampiharana GIS, saingy tetezamita mahaliana ihany koa eo amin'ny famolavolana geospatial sy ny asa sivily. Izany no mahatonga ny fampianarana Remote Sensing sy Hec-RAS ahitana ny hevitra ampiasaina amin'ny ArcGIS sy QGIS, ary amin'ny maha-ambaratonga ankapobeny dia tafiditra ao koa ny fampianarana Google Earth.
Manam-pahaizana momba ny asa an-trano
Modely terrain nomerika. Ity fampianarana ity dia misy fanazavana ny fomba photogrammetric amin'ny fiasa amin'ny maodely nomerika sy ny cloud point izay mampiasa sary, toy ny sary an'habakabaka nalain'ny fiaramanidina na drôna. Mandritra ny Mazava ho azy, AutoDesk Recap, About3D, MeshLab, SketchFab ary Bentley ContextCapture dia ampiasaina amin'ny lahasa mitovy na mifameno. Anisan'izany ny famoronana sehatra mampiasa rahona teboka miaraka amin'ny Civil3D.
Civil 3D Level 1. Ity ambaratonga voalohany ity dia ny fitantanana ireo isa, ny fananganana tohina sy fanovana.
Civil 3D Level 2. Miasa fivoriambe, surf, cross section ary cubing volume.
Civil 3D Level 3. Eto ianao dia afaka mahita fiovana amin'ny ambaratonga efa mandroso kokoa, ary koa ny amin'ny velarana sy ny faritra fiampitana.
Civil 3D Level 4. Miara-miasa amin'ny esplanade, fantsom-pidiovana aho, plot ary intersection amin'ny asa-mitohy.
Torohevitra CAD - GIS miaraka amin'i Excel mandroso sy macro.
BIM manam-pahaizana amin'ny Engineering Electromekanika
Hanavao ny MEP. Eto izahay dia manazava ny fametrahana ireo singa samihafa amin'ny famolavolana fotodrafitrasa, mifandraika amin'ny rafitra elektrika, mekanika ary plumbing.
Rafitra fanatanjahantena. Ity fampianarana ity dia hazavaina isaky ny dingana amin'ny fananganana telo-dimensional ny singa rehetra an'ny tontolo hidradrano trano iray, fifandraisany ary fananganana drafitra farany.
Manavao ny MEP ho an'ny rafitra elektrika.
Hanavao ny MEP ho an'ny rafitra elektrôzika. Ho avy tsy ho ela.
Avereno jerena ny MEP amin'ny rafitra fantson-drano. Ho avy tsy ho ela.
BIM manam-pahaizana momba ny teknikan'ny struktural
Ity Modely ity dia misy ny famolavolana struktural amin'ny alàlan'ny lisitry ny rindrambaiko roa: AutoDesk Revit ary CSI ETABS.
Famolavolana struktural amin'ny fananganana rafitrasa Revit
Famolavolana vy, mampiasa Advanced Steel
Fampahalalana mivoatra miaraka amin'ny struktural robot
Tetikasa struktural miaraka amin'ny AutoDesk.
Amin'ny resaka ETABS, ny tolotra dia:
Volavola tranobe mahatohitra horohoron-tany miaraka amin'i ETABS, haavo 1.
Volavola tranobe mahatohitra horohoron-tany miaraka amin'i ETABS, haavo 2.
Ny manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana struktural miaraka amin'ny CSI sy ETABS.
Masonry ny rafitra miaraka amin'ny ETABS. Ho avy tsy ho ela.
Ny manam-pahaizana momba ny endrika Architectural BIM
Mianara Revit mora
Fototry ny BIM ao amin'ny Architectural Design miaraka amin'ny Revit
Fomba feno amin'ny fomba BIM. Ity dia fampianarana izay mandrakotra ny foto-kevitra momba ny teolojia sy azo ampiharina amin'ny fitantanana ny fomba BIM, ao anatin'izany ny lafiny 4D sy 5D izay ampiharina amin'ny Budgets sy simulation ny dingana fananganana.
BIM 4D mampiasa Navisworks. Tsy ho ela.
Ireo fampianarana ireo dia natokana ho an'ireo izay miomana amin'ny ambaratonga avo lenta amin'ny famolavolana, manoloana ny tsy azo ihodivirana amin'ny fahalalana kaody sasany hamoronana ETLS amin'ny fizotran'ny injeniera miverimberina. Noho izany ny fisafidianana taranja iray momba ny lozisialy fampiroboroboana ny pseudocodes, Ansys izay fifandraisan'ny singa voafetra miaraka amina endrika geometrika ary Dynamo dia nampiharina tamin'ny tetik'asa BIM.
Fampidirana ho an'ny fandaharana
Famolavolana miaraka amin'ny Ansys Workbench
Famolavolana sy fanahafana mekanika mampiasa Nastran. Ho avy tsy ho ela.
Famolavolana mekanika miaraka amin'ny CREO. Ho avy tsy ho ela.
Famolavolana sy fanahafana amin'ny fampiasana MatLab. Ho avy tsy ho ela.
Raha fintinina, AulaGEO dia fanovana fanofanana vaovao sy fanavaozana, fampianarana manokana miompana amin'ny halaviran'ny Geo-Engineering. Ahitana taranja roa ho an'ny Architecture, ny asam-panjakana, ny famolavolana struktural, ny tetikasa BIM ary ny geospatial.
Ity portfolio ity dia azonao atao ny mandika ny fampianarana amin'ny lohahevitra ankapobeny.
Amin'ny làlana rehetraFianarana BIMCourses workflowSekolim-panjakana sivilyCourses Sensor lavitraFianarana GIS
#BIM - Fampahalalana manokana momba ny teknikan'ny struktural amin'ny ETABS
Hevitra fototra amin'ny fananganana mivaingana, amin'ny fampiasana ny ETABS Ny tanjon'ny fampianarana dia ny hanomezana ny mpandray anjara amin'ny fitaovana fototra ...
#BIM - Course ETABS ho an'ny injeniera struktural - ambaratonga 1
Famakafakana sy famolavolana tranobe - ambaratonga Zero amin'ny ambaratonga mandroso. Tanjon'ilay fampianarana ny hanomezana ireo mpandray anjara amin'ny ...
#BIM - Course ETABS ho an'ny injeniera struktural - ambaratonga 2
Famakafakana sy famolavolana tranobe tsy azo ihodivirana: miaraka amin'ny rindrambaiko CSI ETABS Ny tanjon'ny fampianarana dia ny hanome ...
#BIM - Fianarana fanorenana Architecture amin'ny fampiasana Revit
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Revit amin'ny famoronana tetikasa ho an'ny trano amin'ity taranja ity dia hifantoka amin'ny fanomezana anao izahay ...
#BIM - Fianarana teknikan'ny struktural amin'ny fampiasana Revit
Torolàlana ho an'ny famolavolana mahomby miaraka amin'ny Model Model Building izay mikendry ny famolavolana ara-drafitra. Manaova sary, hamolavola ary sorory ny ...
#BIM - Drafitry ny tetik'asa struktural (Rafitra fanavaozana + vy)
Mianara mampiasa ny Revit, Robot Structural Analysis and Advance Steel ho an'ny famolavolana rafitry ny trano. Manaova sary, famolavolana ary tahirin-kevitra ...
#BIM - Manavao ny fandaharana MEP (Mekanika, herinaratra ary fipoahana)
Manaova sary, hamolavola ary soraty ireo tetik'asa misy anao amin'ny Revit MEP. Ampidiro ny sehatry ny famolavolana miaraka amin'ny BIM (Building ...
#BIM - Drafitra baoritra mandroso
Mianara endrika famolavolana mampiasa rindrambaiko Advanced Steel Design. Mamolavola drafitra Fototra feno, tsanganana mandrafitra vakana, antsipiriany drafitra famatsiana ...
#BIM - Rafitra Hydrosanitary mampiasa ny Revit MEP
Mianara mampiasa REVIT MEP amin'ny famolavolana ny Sanitary Installations. Tongasoa ato amin'ity fampianarana ity momba ny fametrahana Sanitary miaraka amin'i Revit MEP ....
#CODE - course Dynamo ho an'ny tetik'asa injeniera BIM
BIM Computing Design Ity lesona ity dia torolalana am-pirahalahiana sy fampidirana ho an'ny tontolon'ny famolavolana ara-kajy amin'ny alàlan'i Dynamo, sehatra iray ...
#CODE - Fianarana fampidiran-dresaka amin'ny fandaharana
Mianara fandaharana, fototry ny fandaharana, flowcharts sy pseudocodes, fandaharana avy amin'ny fepetra takiana: Maniry ny hahafantatra Hahafantatra ...
#CODE - Fampidirana ho an'ny laminasa famolavolana mampiasa workbench Ansys
Torolàlana fototra hamorona simulasi mekanika ao anatin'ity programa famaritana singa voafaritra tsara ity. Betsaka hatrany ny injeniera ...
#GIS - ArcGIS 10 Mazava ho azy - hatramin'ny voalohany
Tianao ny GIS, ka eto ianao dia afaka mianatra ArcGIS 10 manomboka manandanja sy maka taratasy. Ity fampianarana ity dia 100% ...
#GIS - Kursus Pro ArcGIS - hatramin'ny voalohany
Mianara ArcGIS Pro Easy - làlana iray natao ho an'ireo mpankafy ny fampahalalana ara-jeografika, izay maniry ...
#GIS - Advanced Pro ArcGIS Pro Course
Mianara mampiasa fampitaovana avo lenta amin'ny rindrambaiko ArcGIS Pro - GIS izay misolo ny ArcMap Mianara ambaratonga avo kokoa amin'ny ...
#GIS - ArcGIS Pro sy QGIS 3 lesona - amin'ny asa mitovy
Mianara GIS mampiasa ireo programa roa ireo, miaraka amin'ilay modely mitovy fampitandremana Mampitandrina ny fampianarana QGIS tany am-boalohany dia noforonina tamin'ny teny espaniola, ...
#GIS - Kianjan'ny géolocation ho an'ny Android - mampiasa html5 sy Google Maps
#GIS - Fomba fanovana modely amin'ny Safodrano - HEC-RAS hatramin'ny voalohany
Ny famakafakana ny tondra-drano sy ny tondra-drano miaraka amina rindrambaiko maimaimpoana: HEC-RAS HEC-RAS dia fandaharan'asan'ny tafika Corps of Engineers ...
#GIS - Fomba fanodinana modely sy tondra-drano - mampiasa HEC-RAS sy ArcGIS
Fantaro ny tanjaky ny Hec-RAS sy Hec-GeoRAS amin'ny famodinana ny fantsona sy ny famoahana ny tondra-drano #hecras Ity fomba azo ampiharina ...
#GIS - QGIS 3 dingana aorian'ny dingana hatrizay
Ny lalan'ny QGIS 3, manomboka amin'ny zero isika, mandeha mankany amin'ny teboka isika mandra-pahatongany eo amin'ny ambaratonga fanelanelanana, amin'ny faran'izany ...
#GIS - Rafitra fampahalalana Geografika miaraka amin'ny QGIS
Mianara mampiasa QGIS amin'ny alàlan'ny fanazaran-tena amin'ny Rafitra fampahalalana Geographic amin'ny fampiasana QGIS. -Ny fanatanjahan-tena rehetra azonao atao ...
#LAND - Mazava ho azy ny 3D sivika ho an'ny asa sivily - Level 1
Isa, velarana ary fampifanarahana. Mianara mamorona volavola sy sangan'asa mivantana amin'ny rindrambaiko Autocad Civil3D ampiharina amin'ny Topografia ...
#LAND - Mazava ho azy ny 3D sivika ho an'ny asa sivily - Level 2
Assemblies, surfaces, cross section, cubing. Mianara mamorona volavola sy sangan'asa mivantana amin'ny rindrambaiko Autocad Civil3D ampiharina amin'ny ...
#LAND - Mazava ho azy ny 3D sivika ho an'ny asa sivily - Level 3
Fampivoarana farany, sehatra, fizarana miampita. Mianara mamorona volavola sy sangan'asa mivantana amin'ny rindrambaiko Autocad Civil3D ampiharina amin'ny ...
#LAND - Mazava ho azy ny 3D sivika ho an'ny asa sivily - Level 4
Fanazavana, tatatra fanadiovana, teti-dratsy, fihaonan-dàlana. Mianara mamorona volavola sy sangan'asa mivantana amin'ny rindrambaiko Autocad Civil3D ampiharina amin'ny ...
#LAND - Google Earth Course - hatrany am-boalohany
Tongava tena manam-pahaizana momba ny Google Earth Pro ary araraoty fa afaka io programa io ankehitriny. Ho an'ny tsirairay, ny matihanina, ny mpampianatra, ...
#LAND - Fianarana fampidirana fanamafisam-bolo lavitra
Mahita ny herin'ny fahatsapana lavitra. Mahatsapa, mahatsiaro, manadihady ary mahita izay rehetra azonao atao tsy manatrika ...
# Modely Terrain nomerika #LAND - AutoDesk Recap sy Regard3D
Mamorona modely nomerika amin'ny sary, miaraka amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ary miaraka amin'ny Recap Amin'ity taranja ity ianao dia hianatra hamorona e ...
Inona no antenaina avy amin'ny Master amin'ny Geometry Ara-dalàna. Fantatra nandritra ny tantara fa ny cadastre an'ny ...
Ao amin'ity portfolio ity ireto dia afaka mahita ny tolotra ho an'ny rindrambaiko sy ny fifehezana:
Previous Post«Previous Ny Plex.Earth Timeviews dia manome ny sary matihanina AEC farany amin'ny sary misy ao satry ao AutoCAD
Next Post Ny FES dia nandefa ny Observatory India ao amin'ny GeoSmart Indiamanaraka »
3 mamaly ny "AulaGEO, tolotra Mazava ho azy tsara indrindra ho an'ireo matihanina amin'ny teknolojia Geo"
Fernando Guasco Devereux hoy izy:
Izay no hatao tsara fanahy toy izany toy ny hilaza amiko raha toa ka efa nomanina antokony for Cadastre for 2017 momba ireto lohahevitra manaraka ireto, fototra sy nomerika soridrefitany, GIS sy ny tombany Cadastral, fototra sarintany, fototra GIS, GIS maka sary miorina sy mifototra toerana aterineto, fampandrosoana tany am-boalohany, Faritany aretina, fampandrosoana mikasa OT.
Tsy mbola nivoaka ny vidiny. Manantena izahay hamoaka azy ireo tamin'ny tapaky ny volana aogositra.
Ny fomba fandoavam-bola dia mety amin'ny banky, Paypal na carte de crédit.
Jose Heriberto Monroy Aguilar hoy izy:
Miarahaba, Manaova veloma finaritra, manontany momba ny vidiny sy ny fomba fiasa rehefa vita ny modely voalohany. misaotra betsaka